TALIBAN oo sheegtay in uu dhamaaday Dagaalkii Afghanistan - Bulsho News
Kooxda Taalibaan ayaa ku dhawaaqday in uu dhamaaday dagaalkii Afghanistan kaddib markii ay la wareegtay xarunta madaxtooyada ee Kabul iyadoo waddamada reer Galbeedku ay Isniintii isku raaceen inay daad gureystaan muwaadiniintooda.
Boqolaal shacab iyo Diblomaasiyiin ah ayaa saaka buux dhaafiyay garoonka diyaaradaha Kabul si ay uga cararaan colaadda Afghanistan xilli Xoogga Taliban ay xaqiijiyeen gacan ku haynta aqalka looga arimiyo dalkaasi.
Madaxweyne Ashraf Ghani ayaa dalkiisa ka qaxay Axaddii, markii Taaliban ay soo galeen caasimadda, iyadoo aysan jirin cid iska caabbisay, isagoo sheegay inuu doonayo inuu ka fogaado ‘dhiig daata.
“Maanta waa maalin ku weyn shacabka Afghanistan iyo mujaahidiinta. Waxay goobjoog u ahaayeen miraha dadaalkooda iyo naftooda oo ay u hureen 20 sano,” ayuu yiri Mohammad Naciim, afhayeenka xafiiska siyaasadda ee Taalibaan u sheegay TV -ga Al Jazeera.
“Waxaan gaarnay wixii aan raadinaynay oo ahaa xorriyadda dalkeenna iyo madaxbannaanida dadkeenna. Ma oggolaan doonno in dad kale ay dhulkeenna u adeegsadaan goob dagaal, ayn ku beegsado dad kale, inaguna ma doonayno inaan dadka kale waxyeello u geysanno.” ayuu sii raaciyay.
Taalibaan waxay ku qaadatay inay gebi ahaabna qabsato Afghanistan muddo ka yar laba todobaad, iyadoo ugu dambeybtiina ay shalay gacantooda soo gashay magaalada caasimadda ah ee Kabul.
Puntland oo taageertay go’aankii Ra’iisul Wasaare Rooble
Guddiga Doorashooyinka FEIT oo soo saaray Habraaca Doorashada...
RW Rooble Oo La Kulmay Madaxweynayaashii Hore Ee...
Raysalwasaare Rooble Oo La Kulmay Qoyska Ikraan Tahliil